12,000 Karen refugees flee from fighting in Myawaddy (မြဝတီတိုက်ပွဲကြောင့် ကရင်ဒုက္ခသည် ၁၂၀၀၀ ခန့်ထွက်ပြေး) | Burma Election Tracker
12,000 Karen refugees flee from fighting in Myawaddy (မြဝတီတိုက်ပွဲကြောင့် ကရင်ဒုက္ခသည် ၁၂၀၀၀ ခန့်ထွက်ပြေး) Posted in citizen
Eyewitnesses report over 15,000 Karen refugees fleeing from violent clashes in the border town of Myawaddy into Thailand. Refugees reported that they had heard that Myawaddy would soon be burned; others received orders to leave within the hour. The DKBA and the SPDC began fighting the day after the elections. Reports also indicate dozens of Karen villagers injured and hospitalized, with approximately6civilian deaths, from two sources (unconfirmed). The UN has confirmed 1000 refugees have crossed the border. အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ၁၂၀၀၀ ဝန်းကျင် နယ်စစ်ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြကြောင်း ထိုင်းဒေသ အာဏာပိုင်များမှဆိုသည်။ မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောပြချက်များအရ မြ၀တီ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ကရင်ဒုက္ခသည် ၁၅၀၀၀ ခန့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ဒုက္ခသည်များက မြဝတီကို မကြာခင်မီးရှို့တော့မည်ဟု ကြားကြောင်း၊ အချို့မှာလည်း မိမိတို့ကို တစ်နာရီအတွင်း မြို့တွင်းမှထွက်ခွာရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ အစီရင်ခံမှုများအရ ဒါဇင်နှင့်ချီသော ကရင်ရွာသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိကာ၊ ဆေးရုံသို့တင်ပို့ခဲ့ရကြောင်း ခန့်မှန်းခြေ အနည်းဆုံး ၆ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည် (အတည်ပြုနိုင်မှုမရှိသေး)။ ကုလသမ္မကမှ ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးလာကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့သည်။ BACKGROUND (credit: DVB)